Ngwọta ọhụrụ Parla sitere na Spamina, freemium igwe ojii maka ikpo okwu maka ụlọ ọrụ | ECommerce ozi ọma
Eva Maria Rodriguez | | Eziokwu na akụkọ, Ígwé ígwé ojii, CMS na Teknụzụ
Okwu nke Spamina bụ ọhụrụ ngwọta nke email Maka azụmahịa. Ọ bụ ihe gbasara a igwe ojii ntanetị na ihe nlereanya freemium nwere ihe ruru 30GB nchekwa karịa na arụ ọrụ ndị ọzọ yana uru ya na ndị ọzọ njikwa email na-ekwe nkwa na nzuzo nke data azụmahịa.
Site Spamine Ha kwenyere na ịgagharị, dị ka ihe dị iche na ụlọ ọrụ nke oge a, chọrọ ịchọta ụzọ kachasị mma maka ndị ọrụ niile na-arụ ọrụ site na ngwaọrụ ọ bụla na ebe ọ bụla. Ikpo okwu Okwu nke Spamina na-enye azịza maka njirimara nke ụlọ ọrụ nke oge a, na-enyere ha aka arụpụta ihe ọsọ nke nzaghachi na arụmọrụ.
Parla de Spamina na-enye a ụlọ ọrụ email, kalenda, imekọ nhọrọ na wuru na-nche. Na mgbakwunye, ọ na-ekwe nkwa nzuzo nke data azụmahịa na azịza a kapịrị ọnụ site na PRISM, ihe nke ọbụna ndị na-enye America nwere ike ịkwado ugbu a. N'aka nke ọzọ, ekele maka ndokwa ya nwere ike ịda, ọ dị mma maka ụdị ụlọ ọrụ niile na nha niile.
Ihe ngwọta Spamina's Parla abụghị ihe dị mfe njikwa emailKama, ọ bụ sọftụwia na - enye ahụmịhe zuru oke, nchekwa na ngwa ngwa iji nyere gị aka ijikwa azụmaahịa gị nke ọma.
Parla na-arụ ọrụ na kọmputa ọ bụla ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaaka yana njikọ data. Na mgbakwunye, ọ na-enye gị ohere ịga n'ihu na-arụ ọrụ ọbụlagodi na enweghị njikọ Ịntanetị Enwere ike ịnweta ndị ozi igbe na ndị ahịa mpaghara dị ka Nlele, ma site na ngwaọrụ nwere sistemụ arụmọrụ iOS y A gam akporo. Ndị ọrụ nwekwara ike ịbanye na ntanetị Webmail ebe ha nwere ike ijikwa ozi-e, jiri ngwaọrụ mmekorita, jikwaa akwụkwọ, ma ọ bụ jikwaa ọrụ.
1 Spamina Parla: Ngwọta Email zuru ezu
2 Spamina Parla, karịrị email na ụdị freemium
Spamina Parla: Ngwọta Email zuru ezu
Spamine na-ekwuputa na ikpo okwu gị Parla bu ihe omuma email zuru oke na ahia maka otutu ihe, tinyere ihe ndia:
Na teknụzụ, Parla de Spamina na-enye nchekwa dị iche iche maka nchekwa zuru oke megide egwu ndị dị na mpụga, gụnyere nhọrọ mwepụ ahaziri iche dị iche iche na nkwado ọrụ aka pụrụ iche dịnụ awa 24 kwa ụbọchị.
Ihe ikpo okwu a na - aru ​​oru n’ime komputa ma obu igwe n’eji aru oru na intaneti, na agha n’iru iru oru n’agbanyeghi ma o gha. Ejikọtara ya n'ụzọ zuru oke na ngwọta dịka Outlook, iOS ma ọ bụ gam akporo na ndị ọrụ ga-enwe ike ịbanye n'ime ikpo okwu Webmail.
Spamina Parla na-enye gị ohere ijikwa kọntaktị n'ụzọ dị mfe, mepụta ihe omume na kalenda, setịpụ aha, mepụta ma kesaa ihe edeturu ma ọ bụ jikwaa akwụkwọ adreesị.
Onye njikwa akwụkwọ Parla na-eme ka ọ ghara ịdị mkpa ịnwe ngwaọrụ ndị ọzọ nwere onwe ha, ebe ọ na-enye gị ohere ibudata ụdị faịlụ ọ bụla site na desktọọpụ site na iji otu usoro, belata ojiji nke netwọk ụlọ ọrụ na ịchekwa ohere.
Ya ActiveSync protocol na-eme Parla akpaghị aka mekọrịta gị niile data na ihe ọ bụla iPhone, iPad, Android ma ọ bụ mbadamba, na nwekwara ike-enweta site na Safari ma ọ bụ Google Chrome.
Spamina Parla, karịrị email na ụdị freemium
Okwudiri ParlaNa mgbakwunye na ijikwa ozi, ọ na-enye gị ohere ijikwa kọntaktị n'ụzọ dị mfe, kesaa akwụkwọ adreesị gị na ndị ọrụ ndị ọzọ, mepụta ihe omume na-eme kalenda, setịpụrụ ederede y kee ya kalenda, mepụta ma kekọrịta ihe, zụta ndị ọrụ 'dị / ọnọdụ nọ n'ọrụ ma jikwaa akwụkwọ àdreèsị, onye nchịkwa nke ọrụ na modul ahụ ndetu.
Onye njikwa akwụkwọ Parla na-ewepụ mkpa maka ngwa njikwa akwụkwọ dị iche iche ma na-edozi usoro nke ịkekọrịta faịlụ site na email, belata ojiji nke netwọkụ ụlọ ọrụ na ịchekwa ohere.
Site na onye njikwa faili ị nwere ike ịkekọrịta nchekwa n'etiti ndị ọrụ wee bulite ọtụtụ faịlụ nke ụdị ọ bụla na otu nzọụkwụ site na desktọọpụ, onye njikwa faịlụ ahụ ga-amata ụdị faịlụ ebugo ọ bụla ma nye ya akara ngosi emetụtara dabere na ụdị faịlụ ahụ.
Parla na-ejikọ ọnụ na ozi, kọntaktị na kalenda ngwa na iPhone, iPad, Android ma ọ bụ mbadamba ọ bụla. Na mgbakwunye na njikọta nke ndị nwe obodo, ndị ọrụ nwekwara ike ịnweta akaụntụ ha site na safari o Google Chrome kpọmkwem site na ekwentị mkpanaaka ha.
Parla's Cloud Email Firewall solution na-enye ohere nke mwekota na Cloud Email Archiving na izo ya ezo & DLP. Yabụ, nhọrọ Spamina's Cloud Email Archiving na-enye ohere ka edebe email ụlọ ọrụ maka afọ 10, ebe ị na-enye ihe fọrọ nke nta ka ọ nweta ya. Banyere mwekota nke Cloud Email encryption & DLP, ọ na-enye ndị otu ohere ịkwado ntụkwasị obi nke ozi ịntanetị ha, izochi ozi ịntanetị na ikwe ka ndị nnata gụọ ozi ịntanetị n'agbanyeghị nka na ụzụ nke ngwaọrụ ha nwere, na mgbakwunye na ọ na-enyekwa ha ohere izere ụta ozi ahụ. site na email site na iji usoro DLP di elu.
Na ihe niile site na € 0 kwa ọnwa na 1 Gb nke nchekwa, nke nwere ike ịbawanye ruo 30 Gb. Iji mụtakwuo banyere nchekwa na ahịa, gaa na weebụsaịtị nke Spamine.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » CMS na Teknụzụ » Ígwé ígwé ojii » Ngwọta ọhụrụ Parla sitere na Spamina, freemium igwe ojii maka ikpo okwu maka ụlọ ọrụ
Mmalite Wayook gbanwere mpaghara ọrụ nhicha ya na ahịa ahịa ya